Ulonwabo | Isilimela 2022
Ndifanele Ndenze Ntoni Namhlanje? Izinto ezingama-30 ezitsha zokwenza namhlanje
Ndenze ntoni namhlanje? Nazi izinto ezingama-30 zokwenza namhlanje. Sukubambeka kwinkqubo efanayo yakudala, jonga ezinye izinto zokwenza namhlanje.
20 IiWebcams ezinomdla onokuziBukela kwi-Intanethi ngoku
Ezona webcams zibalaseleyo onokuzibukela nanini na naphi na!
Izinto ezingama-30 zokuzonwabisa ezenziwayo ekhaya
Ndidikiwe! Wakhe weva umntu kusapho lwakho esebenzisa loo magama? Uninzi lwethu luye lwenza njalo. Nazi izinto ezingama-30 ezonwabisayo zokwenza ekhaya.
Izinto Ezingama-53 Zokuzonwabisa Onokuzenza Kule Veki
Uzibuza ukuba wenzeni kule mpelaveki? Nazi izinto ezingaphaya kwama-50 zokuzonwabisa ozenzayo ngeempelaveki njengokukhuthaza kwakho ukonwaba ngeempelaveki. Jonga uluhlu kwaye ube nempelaveki emnandi!
Imidlalo eli-10 yokuphumla ukuze udlale kwi-Intanethi ukuNceda uphole
Imidlalo elishumi yokuphumla onokuthi uyidlale simahla kwi-Intanethi. Oku kumnandi kakhulu, kwaye kulungile kwimpilo yakho! Bazame kule mpelaveki kwaye uzive ukhululeke ngakumbi emsebenzini wakho oxakekileyo.
Izibonelelo ezili-10 zokuFunda: Isizathu sokuba ufanele ufunde yonke imihla
Ukuba ungomnye wabantu abangenakubalwa abangawenzi umkhwa wokufunda rhoqo, unokuphoswa: Nazi izibonelelo ezibalulekileyo zokufunda ekufuneka uzazi.
Iincwadi ezingama-25 ezibalulekileyo ekufundwa kuwo ngamnye wabafundi beekholeji
Uluhlu lokubhala ngobugcisa bonke abafundi beekholeji baya kufumana umdla ukujonga; iindlela abanokuthi bancede ngazo abantu abatsha ukuba bafunde.
Eyona Miboniso bhanyabhanya yoMhla woBusuku amaKhwenkwe aya kuyonwabela kanye njengamantombazana
Ukubukela iimovie yindlela entle yokuchitha ixesha kunye, kodwa ukukhetha iifilimu akusoloko kulula. Nazi iifilimu ezili-15 eziza komeleza uqhagamshelo lwakho.
Izinto ezingama-54 wonke umntu kufuneka azi ukuba zenziwa njani
Izakhono ezizimeleyo ekufuneka wonke umntu azi ukuba zenziwa njani.
Iindawo ezingama-25 ezimangalisayo zokundwendwela ngaphambi kokuba ufe
Fumanisa iingcebiso ezingama-25 zokongeza kuhambo lwakho lobomi olude. Ukusuka e-Australia ukuya eMzantsi Melika, qiniseka ukuba nganye yezi ndawo zimangalisayo zokundwendwela ngaphambi kokuba ufe zikuluhlu.
Amahlaya amaJamani ali-10 ahlekisayo
Cinga ukuba iJamani ayigcini ukuhleka? Jonga ezi quips zilishumi ukuze ubone ukuba singangqina ukuba awuchanekanga.
Iindlela ezili-17 zokufumana iincwadi ezilungileyo zokufunda
Iindlela ezili-15 onokufumana ngazo iincwadi ezilungileyo; nokuba ngoncedo lwe-Intanethi okanye ngokwenza umsebenzi womlenze. Uncwadi olutsha lulindele!
Olu luhlu lweQela leHalloween yeQhinga leMpahla liya kuyivuthela ingqondo yakho
IHalloween iza kube kanye ngonyaka. Ngeqela lesinxibo seHalloween, wena kunye neqela lakho niya kuma naphi na apho nikhona.
Iingcamango ezingama-24 ezimangalisayo ze-DIY zokwenza ngeeCD ezindala
Unazo iitoni zeeCD ezindala? Basebenzisele ezi projekthi zintle ze-DIY!
Iifilimu ezingama-23 zoSuku lweValentine Abantu abaze badikwe
Usuku lukaValentine lusuku oluhle lokufumana imovie yothando. Kodwa imovie ekwabelana ngamagama ayo iyasondela. Nazi iimovie ezingama-23 ezilungileyo zikaSuku lweValentine.
27 Kufuneka Ufunde Iincwadi Wonke Umthandi Wenoveli kufuneka Afundwe kube kanye
Ukuba uyakuthanda ukufunda iinoveli, jonga olu luhlu kufuneka ufunde iincwadi eziza kukukhuthaza! Nokuba awukho kakhulu ekufundeni, uya kuzifumana ezi ncwadi zivula amehlo!
Iindawo ezingama-35 zeNdawo zokuHamba eziHlalelekayo zeKhefu lakho elilandelayo
Siphila kwiplanethi entle enika indawo ezininzi ezintle, iiparadesi zetropiki, inkungu egutyungelwe ziintaba-mlilo kunye namanxweme angakholelekiyo.
Iifilimu eziGqwesileyo ezingama-30 zalo lonke ixesha
Olu ayilo luhlu lweefilimu eziqhelekileyo zeefilimu zangaphandle kunye neeklasikhi ezimnyama nomhlophe. Olu luhlu lweeMovie ezingama-30 eziBalaseleyo zeXesha lonke kufanelekile ukuba zibukelwe.
Ukudibana nabafana! Iimbono ezingama-29 zokuKhunjulwa kweeGuy ezingalibalekiyo
Ngaba ujonge umdla, izimvo zohambo lomfana kulo naluphi na uhlahlo-lwabiwo mali? Sukujonga ngaphezulu kolu luhlu lukhulu oluza kufumana iijusi zakho zokuyila.
Iingcaphuno ezingama-22 malunga noBulumko bokwenene
Funda ezi zicatshulwa zemifanekiso ukukhulisa ubulumko bakho namhlanje.